Romana 10 - Ny Baiboly
5Izany no nilazan'i Moizy fa ny olona manatanteraka ny fahamarinana avy amin'ny Lalàna no ho velona amin'izany; 6ary izao kosa no lazain'ny fahamarinana avy amin'ny finoana: Aza manao anakam-po hoe: Iza no hiakatra any an-danitra? (dia ny hampidina ny Kristy izany); 7na hoe: Iza no hidina any amin'ny tevam-be? (dia ny hampiakatra ny Kristy avy amin'ny maty izany). 8Fa ahoana, hoy izy? Izao: Eo akaikinao ny teniny, fa eo am-bavanao, sy ao am-ponao, dia ny teny finoana izay torinay. 9Ka raha manaiky amin'ny vavanao hianao fa Jesoa no Tompo, sy mino amin'ny fonao fa Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty, dia ho voavonjy hianao. 10Satria ny finoana amin'ny fo no ahazoana fahamarinana; ary ny fanekena amin'ny vava no ahazoana famonjena, 11araka ny tenin'ny Soratra Masina hoe: Izay mino azy tsy mba ho menatra. 12Tsy misy hafa na Jody na jentily; satria ny Tompo iray no iombonan'izy rehetra, manan-karena ho an'izay rehetra miantso azy; 13fa izay rehetra hiantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena.
14Hatao ahoana àry no fiantso izay mbola tsy ninoana? Hatao ahoana no fino izay mbola tsy re? Hatao ahoana no fandre raha tsy misy mitory? 15Ary hatao ahoana no fitory raha tsy misy irahina? araka ny voasoratra hoe: Endrey ny hatsaran'ny tongotr'ireo mitory hasambarana! 16Tsy ny rehetra anefa no nanaiky ny Evanjely, araka ny tenin'Izaia hoe: Tompo ô, iza no nino ny teny notorinay? 17Koa avy amin'ny toriteny ny finoana; ary avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny toriteny. 18Fa hoy izaho: Sao dia tsy nandre izy ireo? Tsy izany akory; lasa nanerana ny tany rehetra ny feony, ary tonga hatramin'ny fara vazan-tany ny teniny. 19Fa hoy indray aho: Sao tsy nahalala kosa Israely? Ehe, i Moizy ihany no voalohany nanoratra hoe: Hataoko velom-pialonana an'izay tsy firenena akory hianareo; ary hataoko entin-katezerana amin'ny firenena tsy misy saina. 20Ny an'Izaia indray aza no manoatra, fa hoy izy: Hitan'izay tsy nitady ahy aho, ary niseho tamin'izay tsy nanontany ahy. 21Fa hoy kosa izy nony milaza ny amin'Israely: Naninjitra ny tànako isan'andro amin'ny firenena tsy mino sy mpikomy aho. >